Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Nchọpụta Mmanya
Na-agbasa News Travel • culinary • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
N’emume emere n’oge gara aga na-ekwuwapụta nnweta nke Robert Parker Wine Guide nke Michelin Guides nyere, ndị na-enyocha mmanya webatara ụfọdụ mmanya na-atọ ha ụtọ nke ukwuu na 2019 niile ma kesara ha dị ka ihe mmalite nke “Ihe Ntị,” ihe omume.
Mgbe 10 mmanya dị, ọkacha mmasị m gụnyere:
2015 Lupier ngalaba aha, Navarra, Spain. Organic na Biodynamic. Mkpụrụ vaịn: Grenache.
La Dama nwere nke Enrique Basarte na Elisa Ucar. Obere mmanya a dị na San Martin de Unx, na mpaghara Navarra, Spain.
Na Spain, Grenache (Garnacha) bụ nke abụọ kachasị kụọ mkpụrụ vaịn na-acha uhie uhie. N’agwaetiti Sardinia, a maara mkpụrụ vaịn ahụ dị ka Cannonau ma ekwenyere na mkpụrụ vaịn a malitere ebe a ma buru ya site na ndị Aragonese jichiri agwaetiti ahụ na 14th narị afọ. Na 19th narị afọ phylloxera wetara abamuru na Garnacha n’ihi na ala ubi vaịn lara n’iyi; otu o sila dị, Garnacha siri ike nwere ike mejupụta ubi vaịn ma mezie ụlọ ọrụ mmanya.
Gdị dịgasị iche iche nke Garnacha siri ike ma sie ike, na-eguzogide ifufe na ọkọchị ma dabara adaba maka ihu igwe. Ugboro ugboro na-eto eto na gburugburu ọkụ, mmanya na-egbu mmanya nke mmanya Grenache nwere ike ịdị elu, na-adịkarị karịa pasent 15 ABV. Na tomato nwere mkpa anụ na chara n'onwe mbubreyo na-eto eto n'oge ọ bụ ezie na acid na tannins nwere ike agbanwe dabere na-eto eto na ọnọdụ cropping etoju.
La Dama bụ mmanya na-acha ọbara ọbara nke sitere na mkpụrụ vaịn Garnacha ahọpụtara site na ala iri na ise dị iche iche na vine 15 afọ. Offọdụ n'ime osisi vaịn malitere na mmalite nke 75th narị afọ, toro na ala dị iche iche, nwere nghazi dị iche iche na elu dị iche iche sitere na 400 - 750 mita, ma gosipụta omume nke ụjọ ha. Mmanya a meela agadi maka ọnwa 14 na 700, 500 na 300l French oak gbọmgbọm
Anya nwere obi ụtọ na akwa ruby ​​na-acha uhie uhie na-acha oji. Imi na-achọta aromas rose petals, bee oroma, herbs, cherị na mmiri mmiri. Okpo ọnụ ahụ na-enweta tannins chalky na nkume dị ka ntọala maka currant ojii, akpụkpọ anụ, ụtaba, na akpụkpọ anụ. Ogologo ogologo akọrọ na-anapụta cherị - ness na mineral na-agaghị echefu echefu. Anyịnya mmanya a dị mma nke nwere braised, stewed na anụ a ghere eghe, gụnyere anụ ehi, anụ anụ, anụ ezi, ọkụkọ na egwuregwu. Ọ na-abụkwa enyi akpu na ụdị nri na-adịchaghị ụtọ nke nri Asia. Gụ akụkọ zuru ezu na WINES.TRAVEL.